पहिलो विश्व युद्ध, त्यसपछि ठूलो अवसाद - एकै हातमा यो सबैले, मानिसहरूलाई पैसाको हेरचाह गर्न सिकाउनुभयो, र अर्कोमा, मनोवैज्ञानिक मद्दतको लागि तिनीहरूको आवश्यकता बढ्यो। बीसौं शताब्दीको जैकस मोरनोको 20 -30 वर्षमा समूह मनोचिकित्साले आविष्कार गरेको थियो, तर यदि उनको लागि थिएन भने कसैले अरूलाई आविष्कार गरेको थियो। "आर्थिक मनोचिकित्सा" को समाजमा आवश्यक थियो।
हँसीको दिन, 1 अप्रिल, 1921 मा, एक थिएटर वियना मा मोरेनोको दिशामा आयोजित भएको थियो। यो एक नाटकीय सुधार थियो, जब उत्पादन को सहभागिताहरु संग बातचीत र कार्यहरुमा दर्शकहरु शामिल थिए। उत्पादन असफल भयो, तर मनोदोराम समूह मनोचिकित्सा को एक तरिका को रूप मा प्रकट भयो।
मोरेनो अमेरिकातिर सारियो र चाँडै पक्का गर्न थाल्नुभयो, आफ्नै आफ्नै क्लिनिक स्थापना गरी यो तरिकाले पेट पेन्ट गर्नुभयो।
हामी जोर दिए - मनोवैराम भन्दा पहिले, समूह मनोचिकित्सा बिल्कुल अवस्थित थिएन।
त्यहाँ अफवाहहरू थिए कि मार्नोनो र फ्रेडुड बीचको साँचो विपक्षीहरू थिए, किनभने पहिलो दोस्रो पत्रिकामा प्रकाशन गरिएको थियो, र तिनीहरूले रासायनिक रूपमा विभिन्न प्रकारका मनोचिकित्साको तरिकालाई मान्यता दिए।
के राम्रो छ: व्यक्तिगत वा समूह मनोचिकित्सा?
व्यक्तिगत र समूह मनोचिकित्सा बीचको भिन्नता बारेमा कुरा गरौं।
मर्मत सुरक्षित हुन्छ। सहमत हुनुहोस्, धेरै मानिसहरू एक दर्जनौ भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई भन्दा एक मनोचिकित्सकलाई आफैलाई प्रकट गर्न सजिलो छ। त्यसोभए, सम्भव छ कि रोगीले उहाँको लागि ईमानदार र तनाव कम गर्नेछ।
समय - चिकित्सक को सबै समय र ध्यान एक विशिष्ट ग्राहक को लागि निर्देशित गरिन्छ।
मनोचिकित्सकमा प्रयोग गरिएको "निराशा" र "समर्थन" को तरिकाहरू मात्र एक मनोचिकित्सकले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन। तिनीहरू भन्छन् कि मनोचिकित्सक प्राधिकारी संग व्यवहार गरिन्छ, किनकी यदि यो तपाईंको लागि असंगत छ भने, तपाइँ सजिलै यसलाई खारेज गर्नेछ।
रोगीहरूले कहिलेकाहीं झूट बोल्छन् वा कुरा गर्दैनन्। त्यहाँ मानिसहरु लाई सम्पूर्ण सत्य बोल्न को लागि शारीरिक रूप देखि शारीरिक रूप देखि असमर्थ हो, अरुलाई वास्तविकता को गलेश गर्न को प्रयास गर्छन, र अझै पनि अन्य को सजिलै उनको व्यवहार को केहि पहलुहरु को एहसास गर्दैन। फलस्वरूप, हामी सबैलाई विश्वास गर्नुपर्छ।
समूह मनोचिकित्सा को व्यायाम एक सानो जीवन मोडेल गर्न मा मदद गर्दछ। व्यक्तिले बाहिरबाट संघर्षहरू हेर्न र आफूलाई आफूलाई र समाजलाई धेरै हानिकारक समाधान गर्न सिक्छ।
सहयोग र निराशा - जब 10 व्यक्तिले तपाईलाई विश्वास गर्दछ भने, यो भन्दा राम्रो छ कि तपाईलाई खुशी छ भने तपाईले यो कुरालाई हटाउन गाह्रो छ।
मनोकोषमा पहिलो प्रकारका समूह मनोचिकित्सक हो। तल्लो रेखा भनेको हो जुन उनीहरू आफ्नो समस्याको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छन् जुन उनीहरूको कुर्सो सर्कलमा भित्र राख्छन् र "भित्री" सर्कललाई फारम गर्नुहोस्। सहभागीहरू आज उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहने कुरा सुन्नुहोस् र विषय छनौट गर्नुहोस् जुन आज उनीहरूको सान्दर्भिक छ। यस उत्पादनमा वितरित भूमिकाहरू, समाधान समाधान नभएसम्म दृश्य खेलेका छन्, र त्यसपछि सबैले आफ्ना प्रतिमा दुवै सहभागीहरू र दर्शकहरूको साथ साझेदारी गर्छन्। पछिल्ला जीवनमा उनीहरूको समान परिस्थितिहरूको बारेमा कुराकानी।
यो प्रतिक्रिया, प्रयोग र एकै समयमा अनुभवको आदानप्रदान हो। रोगीको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो पहिलो हो जसले यस्तो समस्याको सामना गर्यो, र त्यसैले, त्यहाँ एक तरिका हो।
तंत्रिका तंत्रको कार्य
Arachnophobia - यो के छ र कसरि गर्न को लागि arachnophobia देखि छुटकारा प्राप्त गर्न को लागि?
Erickson सम्मोहन - यो के हो, आधारभूत सिद्धान्तहरू, विधियों र प्रविधिहरू
व्यक्तित्वको भूमिका सिद्धान्त
व्यक्तित्वको मनोवैज्ञानिक गुण
कसरी जीवित जीवन पूर्ण जीवन सुरु गर्ने?
बुद्धि को विकास को लागि बुद्धि - किताबहरु र व्यायाम
दर्शन, समाजशास्त्र र मनोविज्ञान मा पोजिटिभ्म
हिप्नोथेरेपी - विधि, सिद्धान्त, प्रशिक्षण, पुस्तकहरू, प्रविधिहरूको सार, सत्र कसरी छ?
अर्थ संग मनोवैज्ञानिक फिलिमहरु
एक व्यक्तिलाई खुशीको लागि के चाहिन्छ?
कसरी व्यक्तिलाई सम्मोहन गर्ने?
डिजाइनर जुलिया प्रोखोरोवा
पातलो कुन्नी फोकaccia - नुस्खा
जस्टिन टिम्बरबेक र जेसिका बिईल - प्रेम र सहनशीलताको जीवन
एथेंसमा डियोनेसीस थिएटर
कुन छायाँ नीलो आँखाको लागि उपयुक्त छ?
बच्चाहरु को लागि खरगोश व्यंजन
पनीरको साथ फोकaccia
बच्चाहरु मा न्यूरोस
हल्का जूताहरू के गर्छिन्?
टैरो विभाजन: व्हील का किन्न
Olga Buzovy को हेयर स्टाइल
के हुन्छ यदि म बदसूरत हुँ?
शाकाहारीहरूले माछा खाए?
घरमा कालो मास्क - लोकप्रिय उपाय तयार गर्ने उत्तम तरिका
स्टेंडाप-कमेडियन एमी श्यूमरले इन्सेल्टले म्यागजिनको लागि रोक लगायो
प्रायः शुरुवात गर्भपात - लक्षणहरू
कस्ता पोकाहरू पिडाहरू गर्छन्?
स्टाइल टगल स्विच